I-China Rubber Belt Shot Blasting Machine Production kanye neFektha | I-Ding Tai
Umgomo wokusebenza komshini wokuqhumisa umgibeli uthi ngemuva kokufakwa inani elithile lezicucu zomsebenzi kufakwe emgqonyeni wokuhlanza, isango livaliwe, umshini uqaliwe, isiqeshana somsebenzi siqhutshwa yisigubhu bese siqala ukuphenduka. Phakathi naleso sikhathi, ama-pellets aphonswe umshini wokuqhuma ngokudubula ngesivinini esikhulu akha ugongolo lwabalandeli bese eshaya ngokulinganayo ebusweni bezinto zokusebenza, ukufezekisa inhloso yokuhlanza.
Izinhlayiya ze-projectile nesihlabathi eziphonswa kusuka kwizimbobo kuweleki zingena ku-screw conveyor ezansi bese zingeniswa okhalweni ngesikejana sokuhambisa. Isiguqa siyiswa kusihlukanisi ukuze sihlukaniswe. Thula igesi kusuka kubalandeli ukuze uhlunge kumqoqi wothuli, ungene emoyeni ohlanzekile, odluliselwe esibhakabhakeni, uthuli emoyeni libuyisele ebhokisini lokuqoqa uthuli ngaphansi komqoqi wothuli, umsebenzisi angasuswa njalo. Isihlabathi sokungcola siyakhishwa kubhobho lodoti futhi singaphinde sisebenzise umsebenzisi. Ingxube yesihlabathi se-pellet ivuselelwa egumbini lelo yi-tube yokuvuselela futhi iphinde isetshenziswe ngemuva kokuhlukanisa. Ngokwesisekelo sokunakekela zonke izingcezu zomsebenzi okufanele zihlanzwa, i-projectile engenalutho iyancishiswa ngangokunokwenzeka, ukuze kwandiswe isilinganiso sokusetshenziswa kweprojectile futhi kuncishiswe ukugqokwa kweplate yokuvikela ngaphakathi.
Lo mshini usetshenziselwa kakhulu ukuhlanza isihlabathi, okuxakayo nokuqiniswa komhlaba kokuphonswa okuncane nokuphakathi, ukuthethelelana, ukubamba izingxenye, ukuphonswa kwensimbi okungeyona eyolayini, amagiya neziphethu.
Esedlule: Ngomshini we-Type Shot Blasting
Olandelayo: I-28Gallon Abrasive Blaster ene-Vacuum
wadubula Umshini Wokupholisa, Shot Blasting Turbine, Umshini wokuqhuma kwe-Shot, H umshini wokudubula uqhuma, Shot Blasting Wheel, ukudubula ukuqhuma kwezingxenye ze-Spare, Yonke Imikhiqizo